DHEGEYSO-Biyo dhaamin laga sameeyey qaybo kamid ah gobolka Sanaag. – Radio Daljir
DHEGEYSO-Biyo dhaamin laga sameeyey qaybo kamid ah gobolka Sanaag.
Diseembar 7, 2016 1:33 b 0
Badhan, Dec 07 2016-Gudiga gurmadka abaaraha dowladda Puntland, maamulka gobolka Sanaag iyo qurba joog u dhalatay gobolkaasi oo iskaashanaya ayaa waxa ay biyo dhaamin ka bilaabeen deegaamo katirsan gobolka Sanaag.
Gudoomiyaha gobolka Sanaag Maxamuud Ismaaciil Ciyoon oo waraysi gaar ah siinayey Idaacadda Daljir ayaa sheegay in gobolka laga sameeyey biyo dhaamin haseyeeshee aysan dabooli karin baahida abaareed iyo biyo la’aaneed ee kajidha.
Ciyoon ayaa ugu baaqay dadka hantida haysta inay xoojiyaan gurmadka lagaarsiinayo dadka tabaalaysan ee ay saamaysay abaarta kudhufatay qaybo badan oo kamid ah Soomaaliya.
Xasan Sheekh Maxamuud oo hambalyo u diray maamulka Koonfur Galbeed.